Ny aretin'i Bechterew (spondylitis ankylosing) - ny soritr'aretina, ny fitsaboana, ny fitsaboana, ny hoavin'ny fiainana
Ny aretin'i Bechterev - ahoana no hanatsarana ny kalitaon'ny fiainana?
Ny aretin'ny Bechterew dia aretina mitaiza amin'ny fiolahana fifandonana, izay mahavoky ny fiorenany sy ny fametrahana azy any aoriana. Amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana, dia antsoina koa hoe spondylitis ny idiopathique ankylosing. Ao amin'ny lehilahy (hatramin'ny 30 taona) dia mitombo isa avo lenta kokoa noho izany ny vehivavy. Ankoatr'izany, ity aretina ity dia sarotra kokoa ho azy ireo.
Ny aretina Bechterew - Antony
Io aretina io dia manondro aretina idiopathika. Midika izany fa tsy fantatra hatramin'izao ny antony mahatonga ilay aretina. Na dia izany aza dia efa nanaporofo tamin'ny siansa fa ny Antigen HLA B27 dia tokony ho eo amin'ny vatana ho an'ny fampandrosoana io toe-pahasalamana io. Ao anatin'ireo 90% n'ny marary izay voamarina amin'ny spondylitis ankylosing, dia hita ity singa ity. Ny fisian'ity antigène ity dia tsy manondro foana ny fivoaran'ny aretina. Ny singa iray dia mety ho eo amin'ny vatan'ireo izay manana fanombantombanana latsa-paka amin'ny fisian'ny toe-javatra toy izany.
Ankoatra izany, ny manam-pahaizana sasantsasany dia mihevitra fa io aretina io dia mivoatra eo ambany fitarihan'ny mpitsabo. Misy ny teoria fa mikorontana ny tsy fahombiazan'ny rafi-pandaminana ireo mikiro-moka ireo. Vokatr'izany, ny vatana dia manomboka manamboatra antikôpia tsy ho an'ny mpitsabo fotsiny, fa amin'ny vatan'ny artikular ihany koa. Ny tsy firaharahiana dia mahatsapa azy ireo ho vatana hafahafa. Noho izany antony izany dia manomboka ny fandravana ny vatana.
Ny fiasan'ny autoimmune dia ateraky ny antony toy izao:
dysfunction ny rafitra endocrine;
pahaizana momba ny rafitra avy amin'ny genitourinary;
aretina mahery vaika sy aretina mitaiza.
Ankylosing spondylitis - fanoratana
Misy karazana aretina maro. Miankina amin'ny toerana misy ny toerana misy ny aretin'i Bekhterev dia afaka manana vahaolana tahaka izany:
Ny endrika afovoany - io karazana io dia heverina ho mahazatra indrindra. Mivoatra be ny aretina. Voalohany, manafika ny sacrum izy, ary avy eo mikisaka mankany amin'ny ampahany ambony amin'ny hazavana.
Ny endrika risomelika (mbola fantatra amin'ny endrika fototra). Ny pathology dia misy fiantraikany eo amin'ny valan-javaboary sy ny fiolahana lehibe. Miharatsy ny aretina.
Ny spondylitis Ankylosing dia endriny ivelany. Manana fiantraikany amin'ny valan-javaboary sy ny fiantohana kely ny inflammation.
Scandinavian form. Miaraka amin'io aretina io, dia misy fiantraikany eo amin'ny valan-javaboahary ny aretina, ary avy eo dia mihodina amin'ny tendron'ny tànana, lakolosy, palma ary tongotra.
Ny aretin'ny Bechterew - soritr'aretina
Mba hitsara ny fampandrosoana io toe-javatra io dia manampy famantarana maromaro maromaro. Ny famantarana ny spondylitis Ankylosing dia manana ireto:
ny fanaintainana eo amin'ny hazavana, ny famelana ny tanany, ny tongony ary ny bao;
fanitsakitsahana ny fihetsika;
fahasimbana ny fialan-tsasatra;
atrofy amin'ny hozatry ny lamosina;
mihena ny habetsaky ny rivotra nialokaloka;
Ny tsy fandriam-pahalemana eo amin'ny vatan'ny olona (vao maraina dia afaka mitombo izany).
Ny aretina Bechterew - dingana
Tsy misy afa-tsy 3. Ny dingana manaraka ny spondylitis (Bechterew) dia mety ho ireto dingana manaraka ireto:
Voalohany - misy henjana mihetsiketsika. Ny fanaintainana eto amin'ity sehatra ity dia kely. Matetika ny rongony dia mampiseho ny tsy fisian'ny fakam-panahy na ny tsy fahasalamana kely.
Maivana - mihamafy ny fanaintainana. Mihamitombo ny hetsiky ny fihetsiketsehana. Ny fanadihadiana momba ny radiographie dia mampiseho ny fihenanam-pandrefesana amin'ny articular.
Fotoana - miaraka amin'ny fetran'ny fetra sy fanaintainana mafy. Miaraka amin'ny fanadihadiana momba ny fitaovana, dia voalaza fa misy ny famantarana ny ankylosezy.
Ny aretin'i Bechterew - fanaintainana
Ny fihetseham-po mampidi-doza dia tsy mitovy amin'ny endriky ny fisehoan-javatra sy ny fotoana fisehoan-javatra. Manana fihetseham-po toy izao ny tanora mitaiza ny spondylitis:
henjana sy alahelo mafy amin'ny maraina, saingy aorian'ny 30 minitra dia miharihary ireo soritr'aretina;
Ny fahatsapana hafahafa mahazo ny fihetsiketsehana sy amin'ny toetry ny fitsaharany dia tsy mitombo ny heriny;
Ny faritra misy ny fanaintainan-doha dia miankina amin'ny endriky ny toe-pahasalamana, ary ny hamafiny - avy amin'ny dingana fampandrosoana ny aretina.
Ny aretina Bechterew - Diagnostika
Ny mpitsabo dia asaina fanandramana laboratoara toy izao:
fanadihadiana ankapobeny momba ny ra sy ny urine;
fitiliana ny glucose ;
fitsaboana ra amin'ny immunoglobulins sy antigène.
Ny diagnose amin'ny spondylitis ankylosing dia manampy amin'ny fanodinana fitaovana toy ny fitaovana:
Fanampin'izany, ireto fikarohana manaraka ireto dia manampy amin'ny famantarana ny aretina:
Ny fitsapana Ott;
Ny fitsapana nataon'i Shobera;
ny soritr'aretin'i Zatsepin;
fanaintainana mandritra ny fitsaboana ny hazavana.
Ny aretina Bechterew - fitsaboana
Tsy misy fanafody mahagaga izay afaka manala tanteraka ny aretina. Mba hampihenana ny fivoaran'ny aretina sy hanatsarana ny kalitaon'ny fahasalaman'ny fiainana dia ampiasaina ny fomba fiasa mifandraika amin'izany. Ny fitsaboana rehetra dia azo zaraina amin'ny dingana manaraka:
mijanona amin'ny marary any amin'ny toeram-pitsaboana (fitsaboana io fitsaboana io mandritra ny vanim-potoanan'ny fampihorohoroana);
fitsaboana any ivelany.
Ity no fomba ahafahana manasitrana ny aretin'i Bekhterev:
balneolojika sy ny sisa.
Gymnastics miaraka amin'ny aretin'i Bechterew
Tokony hanaovana fanandramana ny fanatanjahantena raha jerena ny fahasalaman'ny marary sy ny dingana fampandrosoana ny aretina. Ity gymnastics ity dia nosoratana mba hiasana tanteraka ny fiantrana. Ny fanazaran-tena amin'ny aretin'ny Bechterew dia ahitana fiovaovana lalina, fihodinana, fironana miverina. Tokony hampiasaina betsaka araka izay azo atao ny fikambanam-batana. Mba hisian'ny fiantraikany eo amin'ny kilasy dia tokony atao izy ireo tsy tapaka. Tokony hanaovana 30 na mihoatra isa isan'andro ny fanazaran-tena.
Fanafody fanosotra amin'ny spondylitis
Tokony ho mora ny fiantraikany eo amin'ny fiantrana. Ny famongorana mafy dia miteraka fanaintainana. Ankoatr'izay, ny fanodikodinana rehetra dia tokony ho atao mandritra ny vanim-potoana famotsorana. Rehefa hita ny fitsaboana ny spondylitis, dia misy fiantraikany eo amin'ny vatana ny fitsaboana amin'ny fanafody:
manatsara ny fiterahana;
mihinam-panafody ny tonelina;
manamaivana ny fihenjanana sy ny henjana;
mitombo ny fanaintainana;
dia voatahiry ny fahafahana.
Ny aretina Bechterew - fanafody fitsaboana
Ny fanafody tsy mamoafady tsy mamoafady dia fitaovana lehibe indrindra amin'ny ady amin'ity aretina ity. Ny fiantsoana ambany indrindra dia ny herintaona. Tokony ho 5 taona ny fitsaboana fara-fahakeliny. Ny fanafody mampidi-doza mahazatra indrindra amin'ny marary:
Ao amin'ny endrik'io aretina io, ny fanafody cytostatika manaraka dia omena:
Ny fiantraikany amin'ny zava-mahadomelina hormonina. Matetika no manome soso-kevitra toy izany amin'ny fitsaboana spondylitis:
Ny Sulfasalazine ao amin'ny aretin'i Bechterew dia heverina fa ny fitsaboana mahomby indrindra. Ity fanafody ity dia natao ho an'ny marary izay mahazo fitsaboana hormonina sy zava-mahadomelina tsy misy tsiranoka. Araka ny voalazan'ireo manam-pahaizana momba ny fitsaboana, manana tanjaka sy fahombiazana bebe kokoa izy. Na izany aza, mba hahazoana antoka fa tsy diso fanantenana ny vokatra, tokony hifikitra amin'ny dosage prescriptions sy ny fomba fametrahana ny fanafody.
Ny aretina Bechterew - fitsaboana amin'ny fitsaboana amin'ny vahoaka
Rehefa ampiasaina ity aretina ity dia ampiasaina ny "fanafody" amin'ny fanafody hafa. Matetika ny fitsaboana no mandidy toy izany:
Ny aretin'i Bechterew - fomba fanasitranana amin'ny alalàn'ny fanasitranana fandroana
rosemary, fanja, sabelnik ary clover mamy (amin'ny ampahany mitovy) - 300 g;
rano - 5 litatra.
Ny voankazo any an-koditra dia napetraka ao anaty kitapo mavomavo ary atsofoka ao anaty rano miboiboika.
Aorian'ny famokarana dia mamerina ny afo kely ary manodina mandritra ny antsasak'adiny.
Nihamangatsiaka ny tazo ary nisisika nandritra ny ora roa.
Soraty ny zava-mahadomelina ary alatsaho ao anaty rano miaraka amin'ny rano mafana. Ny paikady dia tokony ho 10-15 minitra. Maka bata dia tokony indroa na in-telo isan-kerinandro mandritra ny volana maromaro.
Ny fototry ny thm common dia 220 g;
Loko menavaratra - 1 dec. lovia kely.
Ny fototry ny zavamaniry dia miorina.
Vikao amin'ny ronono.
Soraty ny fifangaroan'ny 18-20 andro.
Miverena intelo isan-andro ao amin'ny faritra voakasika amin'ny vatana. Ireo fepetra ireo dia ilaina mandritra ny volana maromaro.
Ho an'ny aretin'i Bekhterev
Ny fihinanana voalamina tsara dia manampy amin'ny fanamorana ny fahasalaman'ny marary. Ny idiopathic ankylosing spondylitis dia midika ny fihinanana sakafo toy izany:
legioma sy voankazo vaovao;
sira an-dranomasina fa tsy cookery;
vokatra avy amin'ny tsiranoka miaraka amin'ny voka-bary matavy;
voankazo maina, voanio ary voa;
parsley maitso, dill, basil ary ny sisa;
salady feno menaka tsy misy fery;
Ankoatr'izay, ny aretin'i Bekhterev dia manome ny fanesorana ireo vokatra avy amin'ny sakafo:
sakafo mifoka sigara, sotroina ary mofomamy;
Sakafo misy poizina "E-shki".
Ny aretin'i Bechterev - toetran'ny fiainana
Maro ny antony mahatonga ny fiantraikan'ny aretina:
inona ny tendron'olona dia voakasika voalohany;
inona ireo aretina miara-miasa;
Amin'ny toe-javatra inona no misy ny tohatra mifanakaiky.
Amin'ny fidirana ara-potoana amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana, azo atao ny mampiato ny fivoaran'ny aretina sy manamaivana ny sainan'ny marary. Na izany aza, raha tsy misy fitsaboana mety ny aretina dia mety ho diso fanantenana ny aretin'i Bekhterev. Misy fahasamihafana goavana amin'ny fahasarotana manaraka:
Ny iray amin'ireo marary 5 dia manana aretina amin'ny fiasan'ny rafi-panafody. Niharatsy ny aretim-pon'ny aretim-po, ny homamiadana ary ny tsindry.
Ny aretin'ny Bechterew dia miteraka tsy fahampian'ny taova isan-karazany (ny voa, ny fo, ny fo).
Mampivelatra ny aretin-kozatra na ny uveitis - aretina, miaraka amin'ny fahantrana, fahaverezan'ny fahitana sy ny photophobia. Vokatr'izany, ny toe-javatra dia mety hahitana fahajambana ampahany na feno.
Noho ny fanakatonana ny rafitry ny taolam-paty, dia mihalalina ny habetsahany. Mety hampiakatra ny alahelon'ny raboka.
Tsy dia misy "aretina mitaiza amin'ny soavaly" nohavaozina - ny toe-javatra izay misy tsiranoka ny fakan'ny ratra ao amin'ny tendrony ambany. Mampiharihary ny voka-dratsiny sy ny fanasitranana ny rantsambatana, ny fanaintainan'ny ratra, ny fanaintainana mafy amin'ny fandehanana.
Diagnosis of fibrous pulmonary. Amin'ny tranga faha-10 rehetra, io aretina io dia voamarina rehefa mampijaly ny aretin'i Bekhterev ny vatana.
Noho ny famafazana ny tratra, dia mitombo ny mety hampivelatra ny pnemonia sy ny tuberculosis.
Rhinopharyngitis - fitsaboana
AST fitsapana ny ra
Orinasa anatiny - soritr'aretina
Rosacea - fitsaboana ny karazana aretina rehetra
Bromhexine - sirop
Mihena ny granulocytes - inona no dikan'izany?
Antibiotika maoderina amin'ny taranaka farany
Bakteria amin'ny urine
Panaritium amin'ny sandry - fitsaboana any an-trano
Ny volon'ny alika dia manontany, inona no tokony ataoko?
Biby manitra miaraka amin'ny akoho amin'ny multifariate
Risotto miaraka amin'ny ham
Jennifer Lopez sy ny reniny dia nanohana an'i Alex Rodriguez nandritra ny lalao
Vaovao mahatalanjona: Nijaly noho ny fanorisorenana ara-pananan'ny mpianakavy iray i Tim Roth!
Azo atao ve ny mahazo tongolo gasy ho an'ny vehivavy bevohoka?
Ahoana ny fomba hanomezana sakafo ara-dalàna ny zaza vao teraka?
Firy no miaina saka Scottish Slices?
Lamina lava ho an'ny fahavaratra 2016
Elite Arabo Arabo
Ahoana no fomba fitsaboana ny orona ao anaty alika?
Sakafo miaraka amin'ny fromazy